Watford oo guuldarro lama ilaawaan ah dhabarka u saarisay kooxda Liverpool - BBC 1593太阳集团城一切网址 Somali
BBC 1593太阳集团城一切网址 Somali Navigation
Watford oo guuldarro lama ilaawaan ah dhabarka u saarisay kooxda Liverpool
1 Maarso 2020
Rajadii aheyd in kooxda Liverpool ay ku guuleysato Horyaalka Ingiriiska iyadoon marna dhinaceeda dhulka la dhigin xilli ciyaareedkan ayaa waxaa burburiyay kooxda Watford oo ay ku wada dheeleen garoonka Vicarage Road, taas oo 3-0 ku suuldaartay kooxda Liverpool.
Ismaila Sarr ayaa laba gool dhaliyay halka goolka saddexaadna uu ciyaarta ku soo khatimay kabtanka kooxdaasi Watford Troy Deeney
Kooxda Liverpool oo u muuqatay mid isku dhexyaacsan ayaa waxa ay soo badisay 18 kulan oo xiriir ah guul kale oo ay ka gaarto horyaalkana waxa ay ka dhigi laheyd inay rikoor cusub u dhigto horyaalka, hasayeeshee taa baddelkeed waxaa ku barbaratay kooxda Watford.
Guuldarradaasna waxa ay ka dhigan tahay in Liverpool ay haleeli waysay inay badiso 19 kulan oo xiriir ah hasayeeshee waxa ay la siman tahay rikoorkii ay Manchester City hore u dhigtay ee 18-ka kulan ee xiriirka ah ay ku badisay.
Ciyaartii ugu dambaysay ee Liverpool laga badiyo ee Horyaalka Ingiriiska waxa ay aheyd middii 3-dii Janaayo 2019 ay 2-1 uga badisay kooxda Manchester City.
Image caption Labada gool ee Sarr ayaa ahaa goolashii afraad iyo shanaad ee uu xilli ciyaareedkan ka dhaliyo horyaalka
Ciyaartoyda tababare Jurgen Klop ayaa noqday kooxdii saddexaad ee ay u suuragasho in aanan laga badin muddo ka badan sanad. Labada kooxood oo kalana waa Arsenal - 49 kulan oo aan laga badin ay ku jirtay xilli ciyaareed dhan waa 2003-2004 iyo Chelsea oo aanan laga badin laga bilaabo Oktoobar 2004 ilaa Nofeembar 2005.
Guuldarrooyinka kaliya ee Liverpool gudaha Ingiriiska mudadaas ku soo gaartay ayaa kala ah Wolves oo Janaayadii la soo dhaafay ka reebtay koobka FAga iyo Aston Villa oo ku barbaratay kooxda da'da yar ee Liverpool ciyaar ka tirsaneyd koobka Carabao Cup bishii Diseembar.
Image caption Liverpool ayaa waxa ay 17 dhibcood ka horraysaa kooxda ku soo xigta ee Manchester City
Weerraryahannada kooxda Liverpool Roberto Firmino, Sadio Mane iyo Maxamed Salaax ayaa udub dhexaad u ahaa guusha ay kooxdaasi soo gaaraysay 14-kii bilood ee la soo dhaafay.
Kooxda Liverpool ayaa goolal dhalisay 36kii kulan ee kii xalay ka horreeyay ee Horyaalka Ingiriiska, waxa ayna dhaliyeen 104 gool mudadaas aanan laga badin, Mane ayaa dhaliyay (27), Salaax (24) iyo Firmino (12).
Image caption Maxamed Salaax, Sadio Mane iyo Roberto Firmino ayaa dhaliyay 60百分比 goolasha Liverpool ay ku dhalisay Horyaalka Premier League-ga mudadii aanan laga badin
Virgil van Dijk waxa uu dhaliyay (7 gool), Georginio Wijnaldum and Divock Origi (min shan gool) ayey dhaliyeen waana ciyaaryahannada kale ee kooxdaasi ee shan gool ama ka badan mudadaasi dhaliyay.
Laba iyo toban ciyaartoy oo kale oo Liverpool ah ayaa waxa ay u suuragashay inay goolal dhaliyaan, saddex goolna kooxaha kale ee ay la ciyaarayeen ayaa iska dhaliyay.
Fursadaha ugu badan ee goolal lagu dhaliyayna waxaa abuuray Trent Alexander-Arnold (21), Andrew Robertson (14) iyo Firmino (10).
Image caption Ciyaaryahannada goolasha ugu badan u dhaliyay kooxda Liverpool mudadii aanan laga badin